अनुमति नलिई क्लिनिक सञ्चालन « Loktantrapost
अनुमति नलिई क्लिनिक सञ्चालन
२१ भाद्र २०७४, बुधबार ०५:३१
मेचीनगर । काँकरभिट्टामा ‘दिब्यज्योति आइ इयर केयर सेन्टर’ नामक स्वास्थ्य क्लिनिक अबैध रुपमा सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ ।
आँखा र इएनटीको उपचार एकै थलोमा गर्ने भन्दै गत भदौ पहिलो सातादेखि सञ्चालनमा आएको सो क्लिनिकले सम्बद्ध निकायबाट सञ्चालनको अनुमति नलिई शल्यक्रिया लगायतका उपचार थालिसकेको छ ।
स्वास्थ्य उपचारसँग सम्बन्धित कुनै पनि क्लिनिक वा संस्था सञ्चालन गर्नका लागि कानून बमोजिम जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट सेवा सञ्चालन अनुमति लिनु पर्ने हुन्छ । तर दिब्यज्योति आइ एन्ड इयर केयर सेन्टरले सेवा सञ्चालनको अनुमति नलिई धमाधम उपचार गतिविधि सुरु गरेको छ ।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय झापाका प्रशासकीय अधिकृत देवराज कार्कीले दिब्यज्योति आइ एन्ड इयर केयर सेन्टरले सेवा सञ्चालनको अनुमति पाइनसकेको प्रस्ट पारे ।
‘उहाँहरुले अनुमति माग्नु भएको हो, तर सञ्चालन स्वीकृति दिइहालेको छैन’, लोकतन्त्र पोस्टसँगको कुराकानीमा जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत कार्कीले भने–‘स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित क्लिनिक सञ्चालनका लागि जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट अनिवार्य अनुमति लिएको हुनु पर्ने कानूनी प्रावधान छ ।’
काँकरभिट्टाको बाहुनडाँगी रोडको पूर्वी लाइनमा भाडामा लिइएको एक घरमा दिब्यज्योतिको क्लिनिक स्थापना गरिएको छ ।
स्वास्थ्य सम्बन्धी नयाँ संस्था खोल्दा उस्तै प्रकृतिको अर्को संस्था रहेको स्थानभन्दा एक किलोमिटर टाढाको दुरीमा हुनु पर्ने कानूनी प्रावधान समेत मिचेर दिब्यज्योति क्लिनिकले सेवा सुरु गरेको पाइएको छ ।
हाल दिब्यज्योति रहेको ठाउँ मेची नेत्रालयबाट एक किलोमिटरभन्दा कम दुरीमा रहेको छ ।
एक किलोमिटरभन्दा कम दुरीमा नयाँ संस्था स्थापना भएको भन्दै मेची नेत्रालयले नेत्रधाम आँखा उपचार केन्द्रका विरुद्ध इलाम पुनरावेदन अदालतमा रीट दर्ता गरेको थियो । अदालतले नेत्रधामले त्यसरी स्थान सम्बन्धी कानूनी प्रावधान मिचेर नयाँ संस्था खोल्न नपाउने भनी फैसला गरिसकेको छ ।
काँकरभिट्टाका सोमनाथ घिमिरे (विकास) लगायतका केही व्यक्तिहरुले साझेदारीमा नेत्रधाम स्थापना गरेका थिए । अदालतले नेत्रधाम विरुद्ध फैसला गर्नु अगावै नेत्रधामका सञ्चालकहरुले नै संस्थाको नाम फेरेर दिब्यज्योति आइ एन्ड इयर केयर सेन्टर बनाएका हुन् ।
स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका–२०७०को दफा १६ मा स्वास्थ्य संस्था स्थापना हुँदा कायम हुनु पर्ने दुरीको बारेमा प्रस्ट व्यवस्था छ ।
सो दफामा भनिएको छ–‘स्थान छनौट गर्दा पायक पर्ने गरी प्रदूषणमुक्त क्षेत्रको छनौट गर्नु पर्ने छ । छनौट गरिएको स्थान त्यस्तै प्रकृतिको अस्पताल रहेको स्थानको कम्तीमा एक किलोमिटर टाढा हुन पर्ने छ ।’
नेत्रधाम आँखा उपचार केन्द्र र दिब्य ज्योति आइ एन्ड इयर केयर सेन्टर प्रा. लि. दुबै संस्थाको सञ्चालक रहेका सोमनाथ घिमिरे (विकास)सँग सञ्चालन अनुमति लिइएको हो कि होइन भनी जिज्ञासा राख्दा उनले गोलमोटोल जवाफ दिए ।
उनले जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय झापामा अनुमतिका लागि माग गरिएको बताउँदै क्लिनिक सञ्चालन गर्न सम्बद्ध निकायबाटै ‘मौखिक अनुमति’ पाएको जनाए ।
‘हुन्छ हुन्छ सञ्चालन गर्दै गर्दा हुन्छ भनेर उताबाट भनिए पछि हामीले सेवा सञ्चालन गरेका हौँ’, सञ्चालक घिमिरेले लोकतन्त्र पोस्टसँग भने । घिमिरेले मौखिक अनुमति दिने व्यक्ति को हुन् भन्ने खुलाएका छैनन् ।